Amerika Avaratra · Mey, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Mey, 2018
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Mey, 2018
Kamerona: Fanehoankevitra Tamin'ilay Fifidianana An'i Obama
Etazonia 31 Mey 2018
"4 taona lasa izay, tsy fantatr'izao tontolo izao i Obama, nandrasa ny anarany tamin'ireo mpanao gazety, ankehitriny lasa filohan'ny firenena matanjaka indrindra erantany izy. Ity fifidianana ity, ity fiakarana haingana dia haingana ity dia manaitra antsika zanak'i Afrika, satria na eo aza ny fijaliana sy ny tsy fananana asa iainantsika, mila mitazona ity ''fahasahiana manantena'' ity toa an'i Barack isika.''
Serbia: Etazonia An'i Barack Obama, Zava-baovao Iray Ho An'izao Tontolo Izao?
Barack Obama no filoham-pirenena vaovao ao Etazonia. Heveriko fa tsy mety hisy zava-baovao ho an'i Serbia izany (na inona na inona, mivantana be) satria tsy hiova ny politika amerikana mikasika an'i Serbia sy Kosovo. Na izany aza, raha toa tena manaja ireo fampanantenany tamin'ireo fifidianana ny filoham-pirenena vaovao dia tokony hihatsara ny toe-draharaha eran'izao tontolo izao, na ho kely monja aza, ary noho izany ho an'i Serbia koa fa tsy mivantana.
Alaska: Lasa toerana fivahinianana masina ny bisy 142 tao amin'ny sarimihetsika “Into the Wild”
Etazonia 30 Mey 2018
Ny 24 Aogositra 2009, tanora roa mpanao dia an-tongotra lavitra no very tany amin'ny lalankely Stampede akaikin'i Fairbanks, tany Alaska. Nitatitra ireo mpiambina izay nahatsikaritra azy ireo fa nanao akanjo tsotra fanaovana eny an-dalambe izy ireo ary tsy nisy afa-tsy sakafo kely niaraka taminy.
Manorina Fandriampahalemana Amin'ny Alalan'ny Aterineto
Armenia 29 Mey 2018
Nanangana tetikasa iray vaovao amin'ny tambajotra, natokana ho an'ireo tanora (DOTCOM) ny birao misahana ny Fanabeazana sy ireo Raharaha Ara-kolontsaina ao Etazonia an'i Amerika mba hialàna ami'ireo fitsaràna an-tendrony a sy ireo fahatsapàna nifanipaka.
Fironan-kevitra Vaovao Ny “Hijablogs”
Etazonia 28 Mey 2018
Fomba iray hafa manerantany nampisafotofoto ny tontolon'ny bilaogy ny hijablogging. Manerana izao tontolo izao, dia manapaka hevitra ny hitoraka bilaogy ihany koa ireo vehivavy mitondra hijab (sarondoha fitondran'ireo vehivavy silamo ) ...
Fifidianana Amerikana: Sarah Palin Voafitaky Ny Sarkozy Sandoka
Mpanentana roa tao amin'ny onjampeo kebekoazy an'i Montréal ary ireo Mpitsara Miafin'endrika, no namitaka ilay Repoblikana Sarah Palin tamin'ny telefona, tamin'ny fisandohana ho Nicolas Sarkozy. Malaza be ireo Mpitsara Miafin'endrika ireo noho ny efa namitahany tamin'ny telefona ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Jacques Chirac, Britney Spears, Mick Jagger ary, eny, fa na dia ny Filoham-pirenena Sarkozy aza.
Fitsidihan'ny Papa an'i Etazonia: Fanehoan-kevitra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Mey 2018
Mitroatroatra ny tontolon'ny bilaogy sy ny fampitam-baovao tamin'ny fitsidihana maha-Papa voalohany (Benoà 16) tany Etazonia - voalohany noho ny fanararaotana ara-nofo izay nanozongozona ny fototry ny fiangonana Katolika Amerikana enin-taona lasa izay. Niresaka ny olana ny Papa tany Washington D.C.
Iràka: “Tsy Misy Iraharahian'i Obama Antsika…”
Etazonia 26 Mey 2018
« Tsy mila an'i Macyeen, ekena i Bahama ». Bahama ? Nanontany tena aho raha toa ka kandidà iray vaovao io fa izaho no tsy nandre… Nila segondra vitsivitsy aho vao tonga saina fa hay i Obama no tiany nolazaina, tpt
Fijery iraisampirenena amin'ny fifidianana amerikana
Afrika Mainty 26 Mey 2018
Raha mihamanatona ny fifidianana amerikana, mifantoka any amin'ny politika ivelany an'ireo kandidà ny mason'ny iraisampirenena. Misy ireo tetikasa toy ny an'ny fahitalavitra antserasera Current TV, Collective Journalism [en], sy ny an'ny Global Voices sy ny Reuters, ao amin'ny habaka Voices Without Votes [en], nandray an-tanana hanolotra ny fomba fijery ankapobeny.